ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့်အတူနိုးထရန်ကောင်းသောမင်္ဂလာနံပါတ် ၅၀ | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
မာရီယာဟိုဆေး Roldan | | ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, အကွောငျးရငျး
သင်၏တစ်နေ့တာစတင်ပုံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်လာမည့် ၂၄ နာရီအတွင်းသင်ခံစားရမည့်လက္ခဏာကိုပြလိမ့်မည်။ သင်၏နေ့ကိုလက်ျာခြေထောက်ပေါ်တွင်စတင်ရန်နှင့်နိုးလာသည့်အချိန် မှစတင်၍ သင့်တွင်ကောင်းသောစွမ်းအင်နှင့်အကောင်းမြင်အတွေးများရှိရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဒါပေမယ့်သင်ကိုယ်တိုင်အတွက်ကောင်းသောအတွေးများရှိခြင်းအပြင်၊ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့နံနက်ခင်းကိုတောက်ပစေနိုင်သည်။ ကောင်းသောနံနက်စကားစုကိုသူ့ထံအပ်နှံသကဲ့သို့လွယ်ကူသောအရာတစ်ခုခုလုပ်ခြင်း။
နံနက်ယံ၌တစ်ယောက်ယောက်ကိုစာတစ်စောင်ရေးတဲ့အခါ၊ သင်အလုပ်သွားတော့မှာဖြစ်လို့သူ / သူမအိပ်နေလို့လားဒါမှမဟုတ်စာအိပ်မက်မက်တာကိုစာမပို့ဘဲဖြစ်စေ၊ သင့်လက်တွဲဖော်ကိုစာရွက်ပေါ်မှာရေးတဲ့အခါ။ .. ကောင်းသောနံနက်ခင်းစကားစုများသည်သင်၏တစ်နေ့တာတွင်ပျောက်ဆုံးနေသည်မဟုတ်ပါ။
ကောင်းသောနံနက်စာစကားစုများသည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက်သာဖြစ်သည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။ အဲဒီအကြောင်းဘာမျှမ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်သိလိုသည်မှာနံနက်ခင်း၌နိုးသောအခါအခြားသူတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်တို့ကိုသတိရစေသည်။ အဲဒါကကျွန်ုပ်တို့ဟာတခြားသူတွေအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ခံစားရစေတယ်။
ထို့ကြောင့်သင်အလိုရှိလျှင်သင်၏မိတ်ဖက်အတွက်ကောင်းသောနံနက်ခင်းစကားစုကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့သော်သင့်အတွက်အရေးကြီးသောမည်သူမဆိုအတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်၏မိခင်သို့မဟုတ်ဖခင်၊ သင့်မွေးချင်းများ၊ ထိုအထူးမိတ်ဆွေအတွက်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်၏သူငယ်ချင်းများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့မဟုတ်သင့်သူဌေးအတွက်ပင်လျှင်သင်ကသူနှင့်ကောင်းသောဆက်ဆံရေးရှိပါက။ သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့, ကောင်းသောနံနက်စာပိုဒ်တိုများမည်သူမဆိုဖြစ်နိုင်သည်။ မင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့သူကိုမင်းစဉ်းစားပြီးနိုးလာတာနဲ့အမျှသူ့ကိုသတိရနေတယ်လို့သူ့ကိုမြင်အောင်ပြရုံပဲ ပြီးတော့မင်းကိုကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့လိုချင်စေချင်တယ်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းမှန်ကန်သောခြေထောက်ပေါ်တက်ခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ရန်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုပျော်ရွှင်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အခြားသူတစ် ဦး အားကောင်းသောနံနက်ခင်းပြောပြီးကောင်းသောနေ့ဖြစ်ပါစေသင်ကသူတို့ကိုကောင်းသောနံနက်ခင်းပုံစံဖြင့်ကောင်းသောစေတနာကိုပေးပို့နေသည်။
သတင်းစကားကိုလက်ခံရရှိသူကသင့်ကိုချစ်တယ်လို့ခံစားရပြီးသင်ဟာအလွန်အရေးကြီးတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင်ကြိုးကိုတည်ဆောက်လိမ့်မယ်။ ဒါဟာအတော်အတန်နည်းနည်းဟန်ရှိသော်လည်းကောင်းသောနံနက်ခင်းပြောခြင်းသည်ထင်သည်ထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ သင့်ကိုစဉ်းစားသူ၊ သင့်ကိုချစ်မြတ်နိုးသူ၊ အထူးသဖြင့်သင့်ကိုမြင်တွေ့ခွင့်မရမချင်း၊ စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများမှတစ်ဆင့်သင်နှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းရန်ဆုံးဖြတ်သောအခြားသူတစ် ဦး ရှိကြောင်းရှင်းလင်းပြတ်သားသည့်နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်။
ကောင်းမွန်သောနံနက်ခင်းဟုခေါ်ဆိုရန်အတွက်“ ကောင်းသောနံနက်” ဟူသောစကားလုံးနှစ်လုံးကိုသုံးခြင်းသည်လုံလောက်မှုမရှိပေ။ ပထမနေ့ကကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဆုံးမှာတော့ဒီစကားလုံးနှစ်လုံးကိုသုံးရုံနဲ့တော့ရေရှည်မှာပျင်းစရာကောင်းပြီးဆိုးဝါးလာနိုင်တယ်။ ဒါဟာပိုပြီးမူရင်းတစ်ခုခုဖြစ်မနည်းနည်းကွဲပြားခြင်းအားဖြင့်ကောင်းသောနံနက်ပြောမနာကျင်ပါ။ မူရင်းနှင့်တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းသည်နံနက်ခင်းစကားစုများတွင်ပါ ၀ င်ရမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုနည်းဖြင့်သင်ဤစကားစုကိုသင်ရည်ညွှန်းထားသည့်သူ၏ဘဝကိုအမှန်တကယ်တောက်ပစေလိမ့်မည်။
သင်ရေးသားချင်သောထိုအထူးပုဂ္ဂိုလ်ထံစာပိုဒ်တိုများရေးသားရန်အကြံဥာဏ်များမရှိပါကနောက်လာမည့်အရာဖြစ်သောကြောင့်ဆက်ဖတ်ပါ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်မည့်အကြံဥာဏ်အချို့ပေးပါ။ ၎င်းသည်ပိုရှည်သောသို့မဟုတ်တိုတောင်းသောစာကြောင်းများဖြစ်ပြီးပြီးပြည့်စုံသောစာပိုဒ်ကိုရွေးချယ်ရန်အထောက်အကူပြုမည့်စာပိုဒ်ငယ်များပင်ဖြစ်သည်။ ဒီနေ့သင်တစ်ယောက်ရွေးနိုင်ပြီးထိုပုဂ္ဂိုလ်ထံပေးပို့နိူင်သည်။ သို့သော်မနက်ဖြန်သင်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီး၎င်းကိုလည်းပေးပို့နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ချစ်မြတ်နိုးရတဲ့ဇာတ်ကောင်အတွက်နံနက်ခင်းကိုတောက်ပစေဖို့သင့်မှာလွယ်ကူတဲ့အရင်းအမြစ်တစ်ခုရှိတယ်။ သို့မဟုတ်သင်အထင်ကြီးချင်တယ်။
အောက်တွင်သင်သည်နံနက်ခင်းပါသောစာပိုဒ်တိုများစွာကိုတွေ့လိမ့်မည်။ သို့မှသာသင့်အတွက်ယနေ့အချိန်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးသောစကားစုကိုရွေးချယ်နိုင်ပြီးသင်စိတ်ထဲရှိသူထံရည်ညွှန်းနိုင်သည်။ အကယ်စင်စစ်ယနေ့မနက်ဖြန်ကောင်းသောသူ ... မနက်ဖြန်အဲဒီလူကိုစပြောနိုင်မယ်ဆိုရင်၊ သူကသင့်ကိုကောင်းသောနံနက်ခင်းပြောရန်လည်းစိုးရိမ်လိမ့်မည်။ အသေးစိတ်မဆုံးရှုံးပါစေနှင့်၊ ယနေ့နှင့်မနက်ဖြန်မနက်အတွက်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောစကားစုကိုမရေးပါနှင့်။
အချို့လူများကရက်များကိုအထူးပြုလုပ်ကြပြီးသင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ။
ကောင်းသောနံနက်ခင်းပါ၊ အားအင်အပြည့်နှင့်အားပေးမှုများစွာဖြင့်နေ့ကိုစတင်ရန်လျှို့ဝှက်ချက်မှာရာသီဥတုမကောင်းလျှင်ပင်နေထိုင်လိုခြင်း၊ ပြုံးခြင်းဖြစ်သည်။
နေ့သစ်တစ်ခု၏အရုဏ် ဦး ကိုမင်းကဲ့သို့ထူးခြားသူတစ် ဦး အားဝေငှခြင်းသည်အသက်ဆုလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင့်ကိုအကောင်းဆုံးနေ့ရက်များရရှိစေလိုပါသည်။
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ! ဒီနေ့ပိုကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းအသစ်တစ်ခု၊ နေ့သစ်တစ်ခုပါ။ ယနေ့သင်လုပ်သမျှအားလုံးကသင့်ကိုပျော်ရွှင်စေပါစေ။
နံနက်ယံ၌ထ။ နာရီကိုရေတွက်နိုင်သဖြင့်သင့်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ သင်နှင့်အတူပြproblemsနာများမှာမပြင်းထန်ပါ။
ယနေ့ငါ၌ပျော်မွေ့ရန်လိုသည့်အချိန်ထက် ပို၍ လှပသောအရာမရှိ။ မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ!
နင်အိပ်ရာမ ၀ င်ခင်ငါ့ရဲ့နောက်ဆုံးစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတစ်ခုပါ။
နံနက်ခင်းကိုမပြောဘဲငါ့နေ့ကိုမစတင်နိုင်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ပထမဆုံးအတွေးကမင်းပဲ။ မင်းရဲ့စိတ်ကူးအကောင်းဆုံးနေ့ကမင်းရဲ့အကောင်းဆုံးဆန္ဒပဲ။
ဒီနေ့ဟာအရေးကြီးတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါ၊ ပြီးတော့မင်းရဲ့မင်္ဂလာနံနက်ခင်းမှာငါပြောတဲ့အတိုင်းဒီထက်ပိုပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ!
မနေ့ကမင်းအတွက်မကောင်းဘူးဆိုရင်စိတ်မပူပါနဲ့။ ဒီနေ့ဟာမနေ့ကထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးအသစ်တစ်ခုပါ။ မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ!
အမှားတွေဖြစ်လာတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီနေ့မှာသူတို့ဆီကနေသင်ခန်းစာယူပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့တစ်ရက်လုံးသင့်မှာရှိတယ်။ မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ!
နံနက်ယံ၌ထ။ အဘယ်ကြောင့်ငါဤတွင်ရောက်နေရသနည်းဟုကျွန်ုပ်မတွေးမိပါ။ ပြီးတော့သင်? မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ!
နံနက်တိုင်းထ။ ကြီးစွာသောနေ့ဖြစ်မည်ဟုစဉ်းစားမိသည်။ ဘယ်အချိန်ကုန်တော့မယ်ဆိုတာမင်းဘယ်တော့မှမသိဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါဆိုးတဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုငြင်းဖို့ငြင်းခဲ့တယ်…မင်းရဲ့နေ့ကအရမ်းအံ့သြစရာကောင်းလိမ့်မယ်။ မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ!
နံနက်ခင်း၌အပြုသဘောအနည်းငယ်သာသင်၏နေ့ကိုလုံးလုံးပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ သင်လုပ်နိုင်သည်။ မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ!
မနက်တိုင်းအလွတ်စာအုပ်လိုပါပဲ။ ဒီနေ့ဘာကိုရေးချင်တာလဲ။ မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ!
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ! အပြုံးတွေ၊ ပျော်ရွှင်ဖွယ်အတွေးတွေပြည့်နှက်နေတဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုလိုချင်ပါတယ်
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏အိပ်မက်ကိုမတည်ဆောက်ပါက၎င်းသည်သူတို့၏တည်ဆောက်မှုကိုကူညီရန်သင့်ကိုငှားရမ်းလိမ့်မည်။
ဒီနေ့ခေတ်မှာနည်းပညာအသစ်များကြောင့်ရယ်စရာသင်္ကေတများ (သို့) Gifs များပါသောမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အတူလိုက်ပါလာသည်။ သင်ရွေးချယ်ထားသောစကားစုနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေမည့်အရာများကိုသာရွေးချယ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ထိုစာသည်၎င်းကိုလက်ခံရရှိသူအပေါ် ပို၍ ပင်သက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်၏ကောင်းသောနံနက်ခင်းပါသတင်းစကားကိုသင်ပေးပို့ပြီးသောအခါထိုသူသည်ပြုံးပြီးသူတို့ဘဝတွင်သင့်ကိုနေထိုင်ခြင်းသည်အကျိုးရှိပြီးဖြစ်သည်ကိုနားလည်လိမ့်မည်။ ကောင်းသောနံနက်ခင်းကိုပြောနိုင်ရန်အတွက်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရမည်။ ၎င်းသည်အစကောင်းဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု » ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့်အတူနိုးထရန်ကောင်းသောမင်္ဂလာနံပါတ် (၅၀) စကားလုံး